Izindaba Archives | Page 2 of 5 | Umbele
NAMHLANJE ngifise sike sibheke kabanzi ukuthi lwenziwa kanjani ucwaningo lwemakethe uma ufuna ukuqala ibhizinisi. Luyini ucwaningo lwemakethe? Lolu uchungechunge lwenhlolovo yokuqoqa ulwazi lwaleyo makethe osuke ufuna ukungena kuyona ukuze uthole ulwazi olubanzi ukuze uqonde leyo makethe, uqonde nabathengi abakuyo nendawo ibhizinisi lakho nelizosebenzela kuyona.
Ukuzibophezela kwezinkampani ezinkulu ukukhokhela amabhizinisi asafufusa zingakapheli izinsuku eziwu-30 yigxathu elimqoka, kuloba uJohn Dludlu
EMINYAKENI emibili edlule, siyiSmall Business Institute (iSBI), sathumela izincwadi ezinkampanini eziwu-100 ezinkulu ezihweba eJohannesburg Stock Exchange (eJSE) sizicela ukuthi zisikhombise imogomo nemibandela eziyisebenzisayo ukukhokhela izinkampani ezisafufusa.
UNksz uMato Madlala usihlalo weLamontville Golden Arrows nesikhulu esiphezulu esibambile sePremier Soccer League
Akagcini nje ngokuba wukuphela kowesifazane owusihlalo weqembu elidlala kwiPremier Soccer League kodwa futhi uphethe izintambo kwiligi yonke njengesikhulu esibambile. UNksz uMato Madlala uxoxe noSLINDILE KHANYILE
NGENKATHI eqala kwiLamontville Golden Arrows ngokugcwele, umfowabo ongasekho nowayephethe izintambo ngaleso sikhathi uMnu uRocky Madlala, wamtshela ukuthi umsebenzi wakhe kuzoba wukubheka izinhlaka zokuthuthukisa abadlali abasafufusa
UNksz uMbali Msweli noNksz uNkosingiphile Mbatha abasunguli bemikhiqizo ye-African Butter Essentials
Baqala bezithakele izimonyo, bagcina sebethakela abanye nokwatshala umqondo wokusungula ibhizinisi. UZIMBILI VILAKAZI uxoxe noyedwa
IZINKINGA zesikhumba ababenazo zaholela ekusungulweni kwebhizinisi labo lezimonyo zomzimba elikhula ngesivinini.
UNkk uNomusa Dube-Ncube uNgqongqoshe wezeziMali KwaZulu-Natali
Ziqinile izinyathelo zikahulumeni zokungayikhuphuli imali yezisebenzi njengoba isabelomali saKwaZulu-Natali sango-2020/21 esibuyekeziwe siveze ukuthi kunoR5.4 billion oncishisiwe nokuyiwona obubekelwe loku. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUYE ngamagama enkehli kuhulumeni ngodaba lokungayinyusi imali yezisebenzi njengoba uNgqongqoshe womNyango weziziMali KwaZulu-Natali uNkk uNomusa Dube-Ncube ememezele kuleli sonto ukuthi isifundazwe sizonciphisa isabelomali ngoR5.4 billion, okuyingxenye yaso kuR25.3 billion okhishiwe ezweni lonke obekufanele ngabe yiwona obekuzokhushulwa ngawo amaholo kulo nyaka wezimali.
UMnu uSindile Mavundla weKhaltsha Cycles
Usebenzisa uthando lwamabhayisikili ukudala imisebenzi nokukhulisa umnotho waselokishini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
MKHULU umnotho okhona ngenxa yamabhayisikili odinga ukuvukuzwa nasemalokishini ngoba ungasetshenziswa ukuthuthukisa lezi zindawo futhi uvule namathuba emisebenzi.
Kusasa yindali yodumo yonyaka eyaziwa ngokuthi uBlack Friday. Ngalolu suku abantu baphuma ngobuningi babo ngoba bekholwa ukuthi izimpahla zicoshwa phansi, nokho abathengi bayaxwayiswa ukuthi bahlolisise ukuthi amanani ehliswe ngempela yini
ABATHENGI baye babuke uBlack Friday njengosuku lokonga imali ngenxa yokuthi izinto zisuke zishibhile, ikakhulukazi labo abasuke befisa ukuthenga izinto ezinkulu njengefenisha nezisebenza ngogesi.
Ibhange loMbuso lishayelele isipikilli sokugcina onyakeni obuvele umubi futhi lamosha noKhisimusi ngokungayehlisi imalimboleko, kuloba uTHEBE MABANGA
UNYAKA ovele usihlukumezile awupheli kahle, kunaloko uphela kabuhlungu uma kubhekwa imalimboleko enqunywa yiMonetary Policy Committee (iMPC) yeBhange loMbuso enqume ngesonto eledlule ukungayiguquli imalimboleko; njengoba lithe izoqhubeka ihlale ku-3.5%, nokusho ukuthi unyaka wonke iyehlise ngo-275 basis points noma ngo-2.75%.
Uthini umthetho wezokunukubeza ngokocansi emsebenzini?, kuloba uNtokozo Biyela
NGAPHAMBI kokuthi singene shi ekuthini uthini umthetho wezokunukubeza ngokocansi enkampanini, ake sichaze kabanzi ukuthi yini ukunukubeza ngokocansi.
UNksz uTsakani Maluleke oqophe umlando ngokuba wuMcwaningimabhuku-Jikelele wokuqala wesifazane
UMENGAMELI uCyril Ramaphosa usekuqinisekisile ukuthi uNksz uTsakani Maluleke uzoba wuMcwaningimabhuku-Jikelele kusukela ngoDisemba 1 kuze kuphele iminyaka eyisikhombisa, isikhathi abanikwa sona abahola leli hhovisi.
UMnu uSbonelo Mbatha onoxhaxha lwamagaraji nowumsunguli wePetro Connect, esiza abafisa ukungena kule mboni
Zolo lokhu ubetha uphethroli egaraji kepha manje usenoxhaxha lwamagaraji futhi uqeqesha abafisa ukungena kule mboni. Uxoxe noZANELE MTHETHWA ngohambo lwakhe
WAQALA ebamba itoho lokuqhubela abantu izinqola esitolo esidayisa ukudla usondonzima kasomabhizinisi osenoxhaxha lwamagaraji kaphethroli.
UMnu uKhangelani Phungula umnikazi weKhangs Deep Cleaning
UKHETHE ukwenza ibhizinisi lakhe umahambanendlwana ukuze enze lula impilo yamakhasimende akhe onebhizinisi lokuhlanza izinto ezihlukene iKhangs Deep Cleaning.
Imikhiqizo yokunakekela izinwele zabantu abamnyama iZandisa
Bayanda abesifazane abenza imikhiqizo yokunakekela izinwele zemvelo zabantu abamnyama kanti ukuvalwa kwezwe kuvulele, kwandisela abanye amathuba. UNOKWANDA NCWANE uyabika
EMVA kwesikhathi eside begqigqa izitolo ezidumile bengayitholi imikhiqizo enakekela izinwele zabo ngendlela, abesifazane ababili abasebancane banquma ukuzishaya phansi izinwele zabo ababengasazithandi.
UMnu uBilly Dlamini umnikazi webhizinisi lobucwebe
Uncoma izinkundla zokuxhumana oneminyaka enebhizinisi lokukhiqiza ubucwebe, nathi selidlondlobale selinamakhasimende kwamanye amazwe. Uxoxe noZIMBILI VILAKAZI
IBHIZINISI lokwenza ubucwebe lidinga ukuthi ube nothando olujulile lobucwebe kanjalo nobuciko. Lawa ngamazwi kaMnu uBilly Dlamini oseneminyaka enza ubucwebe.
U-SOCRATES wathi: “Ushinto ngeke ulugweme, ngakho into engcono wukuluhlelela.” Wumbono omuhle kodwa ababaningi abantu emhlabeni abebengazilungiselela iCOVID-19 nazo zonke izinguquko ezinqala efike nazo.